Maungtintyin: ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ပြီးဆုံးစေသည်
ကမ္ဘာအနှံ့ ဘာသာအယူဝါဒအားလုံးက ဒါကို ထောက်ခံထားပါတယ်။ အဲဒါရဲ့အကျိုးတရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကမ္ဘာတလွှား ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအကြား တူညီမှု ရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်တိုင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးက အဲဒါကို ဟောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရှိခိုးဝတ်ပြုဆုတောင်းတဲ့ နေရာများမှာ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သူများ မကြာခဏရွတ်ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူမဟုတ်သူများကိုလည်း ဒါရဲ့ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကို လက်ခံယုံကြည်စေပါတယ်။ ဆရာဝန်များက အဲဒါရဲ့ကုသမှု အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ လူနာများကို ပြောပါတယ်။ ရှေးခေတ် ယနေ့ခေတ် ဂုရုများက အဲဒီရဲ့ကောင်းကွက်အားသာချက်ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ပေါင်မုန့်ကို လှီးဖြတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ Pranic ကုသသူများနဲ့ reiki ဆရာများကလည်း ဒါကို စွမ်းအားရှိတဲ့ ကုသခြင်းလက်နက်တစ်ခု ဖြစ်တယ်လုိ့ ယူဆကြပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလောက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ မဟုတ်တာမှန်ပေမယ့် ဒီအတွက် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းဖို့ လုံးဝမလိုအပ်ဘဲ အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလေ့အထကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Oxford English dictionary- မှာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ - “လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခွင့်ပြုဖို့။ ဗွေယူစရာ ဒါမှမဟုတ် တင်နေတဲ့အကြွေးများကြောင့် ရသင့်သည်ဟုယူဆတောင်းဆိုခြင်းအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ဖို့” လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ အဲဒါထက် များစွာပိုမိုပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်လို့ အဆိုးမြင်ဝါဒီများက- အောက်ကျို့ခံတတ်သူနဲ့ သူရဲဘောကြောင်သူများ မတတ်သာသည့်အဆုံး ကျင့်သုံးရတဲ့ - ပျော့ညံ့တဲ့သူမှာ ဖြစ်တည်တာလို့ မြင်ပါတယ်။ “ပျော့ညံ့အားနည်းတဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းမရှိ။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ ခွန်အားရှိတဲ့သူများရဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း ဖြစ်တယ်” လို့ MK Gandhi က ပြောခဲ့သလို- စွမ်းအားရှိတဲ့သူများကသာ အဲဒါကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်ဆိုတာကို အသိအမြင်ကြွယ်ဝသူများက ပြောကြပါတယ်။
အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိပါတယ်။ အကြောင်းက သင်ဟာ သင့်ကို နာကျင်ထိခိုက်စေပြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သင် ခွင့်လွှတ်တဲ့အခါ သင်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ စွမ်းအင်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ အဆိပ်ဖြေပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ဟာ လွတ်လပ်ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ ၀ိညာဉ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စင်ကြယ်သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။
University of Wisconsin မှ လေ့လာမှုအရ - လူများဟာ ခွင့်လွှတ်နေလေလေ သူတို့ဟာ နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့အတိုင်းအတာမှ ခံစားရမှုနည်းလေလေ ဖြစ်တယ်- လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အကျိုးတရားက သူတို့ရဲ့ နှလုံး, သွေးကြောတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အရာများ၊ အာရုံကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ စနစ်များ လည်ပတ်ရာမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သူလို့ခေါ်တဲ့ ဒေါသနဲ့မကျေချမ်းမှုက ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ မပျော်ရွှင်မှုကိုသာ အကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ သယ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ “ သင် ခွင့်မလွှတ်လျင် သင်ဟာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်သူရဲ့အတွေးများကို ဆက်လက်တွေးနေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ မကျေနပ်မှုများ ဆက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်” ဆိုတာက Pranic ကုသတဲ့ဆရာ Choa Koi Sui ကို အထောက်အကူ ပြုခဲ့ပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်း, ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် သင်ဟာ အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ရရှိပါတယ်။ ဝေဒယဉ်ကျေးမှုနောက် လိုက်တဲ့သူများဟာ သူတို့ရဲ့ရန်သူများအတွက်တောင် ပျော်ရွှင်မှုကို ခွင့်ပြုဖို့ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးသုခအတွက်သာမက သူတို့ပြိုင်ဘက်ရန်သူများရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက်လည်း ဘုရားသခင်သို့ ဆုတောင်းကြပါတယ်။ ဝေဒပညာရှင်များက အားလုံးသော ၀ိညာဉ်များအကြား မမွေးဖွါးမီ တူညီမှုတစ်ခု၊ ကွင်းဆက်တစ်ခုနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်ပေါင်းစည်းခြင်းကို ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင် အခြားသောသူကို မုန်းလျင် သင်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင် မုန်းနေသည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
“သင် လူတစ်ယောက်ကို မကြာခဏ ဘယ်လို ခွင့်လွှတ်မလဲ? ၇-ကြိမ်ထိလား?” Jesus Christ ကို သူ့ရဲ့တပည့် Peter က မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ “ ၇-ကြိမ်တိုင်အောင်လို့ သင့်ကို ငါမပြောခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အကြိမ်များစွာတိုင်အောင်” လို့ Jesus က ပြန်ဖြေပါတယ်။ Jesus တောင် သူ့ကို ကားစင်တင်အဆုံးစီရင်တဲ့ သူများကို “အဖ ဘုရားသခင်! သူတို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ သူတို့လုပ်တဲ့အရာကို သူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်”လို့ ခွင့်လွှတ်ဖို့ ဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းမှာ Christians များက “အကျွန်ုပ်တို့ကို ဆန့်ကျင်အပြစ်ပြုတဲ့သူများကို အကျွန်ုပ်တို့က ခွင့်လွှတ်တဲ့အတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များအတွက် အကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ”လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီသတင်းစကားက ရှင်းပါတယ်။ သင် အခြားသူများကိုခွင့်လွှတ်မှသာလျင် သင့်ကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ Allah ဟာ အလွန်အမင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Prophet Muhammad က သူတို့ရဲ့မသိမိုက်မဲမှုများအတွက် လူများကို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ရန်သူများအတွက် ခွင့်လွှတ်ဖို့ အမြဲတမ်း အသင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ခွင့်မလွှတ်ခြင်းဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုပတ်လည်မှာ တစ်သားတည်းရှိမှုကို စိတ်တူသဘောတူဖြစ်မှုကို ဆက်လက်ဖန်တီးနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ပြန်လည်မွေးဖွားတဲ့အရာ- တန်ပြန်သက်ရောက်လာမယ့်အရာ ဖြစ်တယ်လို့ Buddhists များက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ Jainism မှာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူက စိုက်ပျိုးတဲ့ အဓိကမွန်မြတ်စင်ကြယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် တင်ပြထားပါတယ်။ အဆုံးစွန်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ ဓမ္မဆိုင်ရာ ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာ ၁၀-ချက်ထဲက လက္ခဏာတစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် Jainsm မှာ ပုံဖော်ထားပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ ကြီးမားတဲ့ခွန်အား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ခွင့်လွှတ်တဲ့သူကော ခွင့်လွှတ်ခံရသူပါ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ဘ၀ကို လုံးဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ မွန်မြတ်သန့်စင်ပြီးအတ္တကင်းတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Sunday, January 23, 2011